Ayaan Xirsi Cali oo asalkeedu Soomaali yahay, kana baxday diinta Islaamka, ayaa weerar ku qaaday islamarkaana cambaareysay hadal ka soo yeedhay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Aqalka Wakiillada ee waddanka Mareykanka.
“Nidaamka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee Mareykanka ma ahan mid cadaaalad samaynaya, wuxuu mudnaanta siiyaan kuwa gaar ah, wax shaqo ah kuma laha qofka faa’iidaya iyo kan laga faa’iidayo wuxuu u baahan yahay wax ka beddel” ayeey tidhi Ilhaan Cumar.
Ayaan Xirsi ayaa naqdisay hadalka Ilhaan, waxaanna waraysi ay siisay Fox News ku sheegtay in Ilhaan oo ka mid ah wakiilada sharci dejinta Maraykanka in hadal noocaas ah uu ka soo yeedho ay la yaab ku noqotay, waxaanna ay difaacday in nidaamka Mareykanka aanu u baahnayn in wax laga beddelo sida ay sheegtay Ilhaan, ee uu yahay mid damaanad qaadaya xorriyadda sinaanta iyo cadaaladda.
“Maxay ugu soo qaxday Muqdisho.? Maxay uga soo qaxday dowlad la’aan iyo fowdo.? Maxay kaga soo qaxday dulmi, oo ay Maraykanka u timid, haddana ay i doonaysaa in ay Minnesotta aad u beddesho Muqdisho” Ayeey tidhi Ayaan Xirsi.
Dooddan cusub ee u dhexeysa labada gabdhood ee Soomaalida ah, ayaa waxaa Durbaankeeda si wayn u gaaracaya qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka, gaar ahaa kuwa siyaasadda midigta waana arrin si gaar ah ay u farxad galineysa dhinacyo kala duwan oo ay colaad siyaasadeed kala dhexeyso Ilhaan Cumar.
Kooxaha siyaasadda midigta iyo Yahuudda ee Mareykanka ayaa beegsanaya Ilhaan Cumar, waxaana hadda muuqata inay u adeegsanayaan gabadh kale oo Soomaali ah. Ilhaan ayaa cadaawad ku abuurtay siyaasaddeeda ku dhisan Yahuud naceybka.
Halkan ka daawo weerarka Ayaan Cali Xirsi ku qaaday Ilhan:-
Posted by The Daily Briefing on Friday, 10 July 2020